Herbivory | Reef Resilience
Ny macroalgae dia afaka manakana ny faharetana amin'ny alàlan'ny famonoana sy famonoana ny zanatanin'ny mpanjono, ary amin'ny famokarana akora simika izay mamono ny haran-koditra na mametra ny fidiran'ny vatohara amin'ny alàlan'ny fametrahana ny haran-dranomasina fecundity, ny tahan'ny fitsinjaram-pahefana, ary ny fialan-tsasatra taorian'ny fandaminana. Ny herbivore dia manampy amin'ny fikojakojana ny fototry ny algoma mba hahafahan'ny mpitrandraka haran-koditra. Rehefa tsy misy ny fambolena, dia mety hiteraka koralika haingana kokoa ny macroalgae. Izany dia manaloka ny hara-doha amin'ny hazavana tsy manam-paharoa izay afaka miteraka ny fihenan-kery amin'ny toetan'ny vatohara sy ny fialana, ary mampihena ny habaka ho an'ny fananganana coral. Izany dia mety miteraka dingana fizika.
Ny karazam-biby dia samy hafa ary tsy misy vondron'ny fanamiana ara-tontolo iainana. Izy ireo dia ahitana vondrona marobe izay samy hafa amin'ny fomba fikarakarany, ny zavatra atokany, ary ny fiantraikany eo amin'ny fitaovana. Misy efatra fikambanana ny harena voajanahary haran-kisoa, mpanodina, graffers, navigateurs ary mpanavotra-ary ny tsirairay dia manana anjara amin'ny fisorohana ny rafi-pitaterana maranitra. ref
Ny anjara asan'ny Herbivores
Ny herbivore dia manampy amin'ny fitantanana ny firafitry ny vondrom-piarahamonina sy ny asa amin'ny rafitra ara-tontolo iainana maro. Ankoatra ny fanaraha-maso sy ny fiantraikany amin'ny fifandraisana eo amin'ny mpivarotra sy ny macroalgae, ny trondro sy ny gidro dia samy mpandraharaha bioerosion. Ohatra, ny paprotiana dia mandavaka ny moron-dranon'ny vatohara na ny haran-dranomasina rehefa mamahana izy ireo, ary ny kitapo dia alaina avy amin'ny valanoranony, mihena amin'ny sediment ary miala amin'ny rafitra. Ny dingana toy izany amin'ny haran-dranomasina dia manana andraikitra lehibe amin'ny fitazonana ny fivoaran'ny haran-dranomasina sy ny fako. Ny fambolena bakteria dia manampy amin'ny fialana amin'ny vatohara amin'ny alàlan'ny fanesorana ny vatohara maty sy ny fanadiovana ny faritra ho an'ny fanjanahan-tany amin'ny benzic organisms, manamora ny fikajiana, ny fitomboana ary ny fivelaran'ny alokaloka sy ny haran-dranomasina.
Ny mason-tsivana ara-boajanahary momba ny haran-dranomasina dia mety manana làlam-po mahazatra na miiba, ary izany dia voafehifehy noho ny habetsaky ny haavon'ny herisetra (izany hoe, raha toa ny haavon'ny taha dia avo loatra amin'ny fanaraha-maso ny fandrobana ny macroalgae). Mety hampihena ny fihenan'ny vatohara na ny fatran'ny macroalga ny korontana toy ny fitrandrahana ny fambolena, ny fivalanana ny haran-dranomasina ary ny aretin'ny vatohara. Raha vao voapoizin'ny macroalgae ny vatohara dia manatanjaka ny herin'ny macroalgae ny fahasamihafan-tsakafo ka mahatonga azy ireo ho sarotra ho an'ny vatohara. Ohatra tsy ampy amin'ny teny malagasy Izany dia mety ho vokatry ny fihenan'ny fibobohan-trondro voa (ohatra, noho ny tsy fahampian-tsakafo), ny vokatra avoakan'ny alga (ohatra, noho ny fifantohana amin'ny fiterahana ambony), ary / na ny saron'ny vatohara ambany (ohatra, ny hetsika vao haingana). Raha vao mandroso ny macroalgal dia ahafahana manamboatra ny herbivorezy mikarakara ny biomass macroalgal, ny famokarana makroalgae ary ny fahasimbana amin'ny haran-dranomasina dia mety haingana sy sarotra ny hivadika satria manimba ny haran-dranomasina ny macroalgae ary mampihena ny fikarakarana ny haran-dranomasina. Ny fihenan'ny vatohara dia mampihena ny fahasarotan'ny haran-dranomasina; Ny fihenan'ny habakabaka ambany kokoa dia mety hampihena ny fisorohana ny haran-dranomasina (fampihenana ny fisian'ny alaola), ary ny famerenana ny trondro voa (noho ny fihenan'ny famantaran-tsakafo). ref Ny mpikaroka dia nanadihady ny fihenan'ny vatohara ho setrin'ny fanesorana trondro voa avy amin'ny vatohara any an-toerana na eo amin'ny faritra. ref
Ny valin'ny feedback dia mamokatra "spiral death biotic" mifanohitra amin'ny faharetan'ny haran-dranomasina tsara. Ny fifandraisana amin'ny biôsea mamokatra fanehoan-kevitra mahasoa na manimba izay manamboatra harambato amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny alan'ny ala, amin'ny fihenan'ny vatohara, trondro ary ny rafitra ara-drafitra (havia havia amin'ny sary), na amin'ny fitondran'ny alàlan'ny alàlan'ny ala maromaro , trondro marobe, ary fitomboan'ny rafitra mifototra amin'ny fitomboan'ny haran-dranomasina (ankavanana amin'ny sary). Ny tahan'ny herbivory dia fifanakalozan-dresaka mafonja na tsia. Loharano: Mumby sy Steneck 2008, Hay sy Rasher 2010.
Ny fatiantoka amin'ny herbivore, amin'ny alalan'ny fitrandrahana, dia mety hiteraka fiovana amin'ny haran-dranomasina voapoizina amin'ny vatohara misy populaire be dia be. Mba hiantohana ny faharetan'ny haran-dranomasina dia tokony hifantoka amin'ny fiarovana ny mponina ny herbivore ny asa fitantanana. Sary © Stephanie Wear / TNC
Ao anatin'ny fanodikodinam-panandramana trondro be dia be, Hughes et al. Ny 2007 dia nanandrana ny fiantraikan'ny herbivore amin'ny faharetan'ny fivoriambe. ref Ny fanandramana dia natao tao amin'ny Haran-dranomasin'ny Barrage Lehibe taorian'ny fanamafisana ny faritra tao amin'ny 1998 tao anaty tahirin-tsambo tsy misy fisakafoanana izay nitombo be ny fihenan'ny varimbazaha sy ny fahasamihafana tamin'ny fanamiana.
Ao amin'ny faritra mifehy ny sisin-tany, izay be dia be ny hazandrano, nitombo be ny alim-bary, fa ny avoakan'ny haran-dranomasina dia avo roa heny (hatramin'ny 20%) nandritra ny telo taona, indrindra noho ny famerenana ny karazam-borona teo an-toerana. Mifanohitra amin'izany, ny fanesorana trondro goavam-be dia niteraka fipoahana tamin'ny macroalgae, izay nanaisotra ny fecundity, famerenana, ary ny fahaveloman'ny vatohara. Noho izany, fitantanana ny tahiry trondro dia singa manan-danja amin'ny fisorohana ny fiovaovan'ny vanim-potoana sy ny fitantanana ny harafesin'ny haran-dranomasina.